Noocyada koodhka gadaal iyo qaab-dhismeedka ayaa ugu fiican SEO-ga?
Ka hor intaanan sii wadi kareynin dib-u-eegista kumbuyuutarka nambarka caadiga ah iyo qaabka sida caadiga ah loo isticmaalo ujeedooyinka SEO, aan u sheego qeexitaanno aasaasiga ah. Si fudud u dhig, gadaal kasta (haddii kale, xiriirka internetka ee ku jira) wuxuu ku dhashay marka mid ka mid ah website-yada uu leeyahay URL u hogaaminaya siyaabaha kale ee sadexaad ee dhinaca kale ee internetka - adoo samaynaya tixraac, ama ku darista URL. Dhamaan boggaga internetka ee boggaga internetka ayaa ka dhigaya boggiisa xiriirka. Habkaas, mashiinnada raadinta waaweyn sida Google iyo Bing waxay u adeegsanayaan si loo go'aamiyo qiimaha dhabta ah, caansanaanta, iyo muhiimada shabakad kasta ama barta blog kasta. Iyadoo la tixgelinayo in dhammaantood aan loo simanayn, isla markaana dib u soo noqnoqonaya marxalado tiradooda ugu badan. Marka ay timaaddo dhismaha xiriiriyaha organic ee ujeedada SEO, waxa ay tahay waxa kaliya ee ku xiran arrimaha tayada, halkii ay ka tiri lahaayeen.
Sida horeyba u sheegay, ma aha dhammaantood. Taasi waa sababta, ka hor intaan wax kale jirin, aynu kala saarno faraqa u dhexeeya labada nooc ee ugu muhiimsan ee xiriirka websaydhka. Dhab ahaantii, waxay ku kala duwan yihiin qaababka HTML ee code-ka, iyo sidoo kale saameynta caadiga ah ee bogga kasta oo ka muuqda aragtida SEO.
Dib-u-qabashada dib-u-dhiska waxaa loo isticmaalaa oo keliya in lagu xiro laba bog oo shabakadeed oo kala duwan oo "isku-soo-jiidaya" laakiin si loo wareejiyo iyo dib-u-marin loogu sameeyo heerarka tayada labada dhinac. Isagoo ka hadlaya guud ahaan, dib u eegisyada leh DoFollow waxaa badanaa lagu aqoonsadaa midka ugu muhiimsan, marka ay timaado bixinta boosaska joornaalka. Noocyada shabakadaha noocan ah waxaa loo isticmaalaa in lagu siiyo qiimeyn heerkulleedka PA (maamulka bogga), DA (maamulaha domainka), PR (PageRank), iyo inta kale ee cabbirka sida kalsoonida isticmaalaha. Inta badan, xiriirada websaydhka ee leh astaamaha DoFollow ee koodhooda gadaashooda waxaa lagu geliyaa wargeysyada, iyo sidoo kale blog ama maqaallada maqaarka. Mararka qaarkood waxaa laga helaa fariimaha qoraalka iyo faallooyinka.
Backlinks backlinks waxaa loogu talagalay in lagu xiro laba bog oo internet oo kala duwan, i. e. , inta badan ujeedooyinka socdaalka kaliya. Waxaa loola jeedaa in dabeecada 'Code backlink backlink' aysan wax lacag ah ka helin bogga ama bedelka maamulka hay'adda (a. k. a. isku xidhka casiir). Maskaxda ku hay in farqigaas u muuqda inuu yahay mid aad u macquul ah marka loo eego taranka iyo dib u eegista, iyo sidoo kale qiimeyn heerar waaweyn.
Qaab dhismeedka Qodobka Backlink ee SEO
Maxaa keenaya qaabdhismeed aasaasi ah ee dhabarka ah ee SEO? Xaqiiqda, xiriir kasta oo soo socdaa wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha asaasiga ah ee soo socda: Tixraaca sharaxaadda ee hypertext, qoraalka qoraalka, tixraaca xidhiidh, iyo xidhitaanka tag.
Dhabar kasta wuxuu ku dhashay
iskuxirku wuxuu ku saabsan yahay in la raaco, sidoo kale waa la riixi karaa oo uu leeyahay tilmaam midab gaar ah si uu uga fogaado inta ka baxsan bogga bogga intiisa kale.
Xirfad kasta waxay ku dhammaataa xiritaanka tag, taas oo sheegaysa matoorada raadinta ee ku saabsan xiritaanka dhammaystirka dhammaadka hyperlink Source .